Roomslọ mgbapụ pụrụ iche na LevelXL - Thrilltalk.com
Home/Ime ụlọ/Roomslọ ndị gbapụrụ iche na LevelXL
Roomslọ ndị gbapụrụ iche na LevelXL
0 28 Nkeji 1
Northern Netherlands nwere nso ụzọ mgbapụ na ụlọ mgbapụ. Nnukwu ụlọ mgbapụ nwere isiokwu dịka: 'The Shel Van Pablo Escobar'na' La Casa Del Oro '(dabere na Netflix stunner Casa de Papel). The Flashcaperooms nwere isiokwu 'Pirates' na Onye Elfstedentocht. Ha nwekwara laser batleroom, nke a na-enyocha diamond site na ụdọ laser.
Nke a pụrụ iche ụlọ mgbapụ dị mma ma nwee nnukwu ikwughachi uru. Nkọwa na 'Ikuku wakporo ebe obibi si Pablo Escobar'dị ezigbo mma. Ga-ahụ nke ọma na ndị rụrụ ụlọ ndị a emeela akụkọ. Echegbula, anyị agaghị emebi ihe ọ bụla!
N'ihe banyere ntụrụndụ, ị nọ ebe kwesịrị ekwesị na LevelXL n'agbanyeghị. Mgbe otu n'ime ụlọ mgbapụ ị nwekwara ike ime ndị ọzọ ihe omume ime tinyere: ọkụ ọkụ, ebili mmiri, tebụl ọdọ mmiri. O doro anya na ị nwekwara ike ijide nri ị ga-eri n'ụlọ nri karịa oche 120.
N'ihi usoro ndị gbara gburugburu corona virus, ọ dị mkpa ịme ndoputa. Do na-eme nke a site na njikọ a.
Onye Elfstedentocht Dragten Ime ụlọ ebe nchekwa Ego ahụ agha laser LevelXL Pablo Escobar Piraten idobere
Usoro 1 ga-amalite ọzọ na July 3